Author: Kigrel Galmaran
Search Query Display results as: Saddex baa rag u wanagsan. Unknown July 30, at 2: Saddax waa lagu xamdiyaa. Saddex baa rag u liita. Adhi-jiri ma kala abaal weydo. Unknown December 17, at Soomaalidu waxay ku jirtaa dadka aad loogu tilmaamo inay leeyihiin luqad hodan ah oo u suurto galisay inay reebi karaan odhaah nuxur leh oo xambaarsan macna xeel dheer,jirina karta inta ay jiraan dad isticmaala luqadaa.
Saddex baa suldaanka lagu eega. Nuxurka maahmaahdani waxa weeye; haddii aad waxba ka hidin weydo bartaada mood iyo noolba waxba kuu ko…. Saddex waa xarago adduunyo. Aburku intaanu kugu tufin, baa lagu tufaa. Balaayo laba qad ha kuu jirto. Ama afeef hore lahow ama adkaysi danbe Afkaad goojaamo kaga keentay kula hadal.
Diiriye Hode March 24, at 9: Adhi shidho laga daayo. Way adag tahay inla samraa, waxase ka xun inla soomawliyeed abaalmarinada samirka. Saddex baa la yidhi: Si loo daweeyo dhibaatadan waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa maahmaahihii inta aanu ka ururin karnay ilaa iminka, wixii kalee aanu ka ururinana waanu ku daraynaa haduu eebe idmoh Xarafka A 1. Unknown October 29, at 6: Mnsh alh aadban uga helay murtidan run ahaanti luqada somaligu waa mid ku hodan murtida. Saddex saddex loogama maarmo.
Saddex saddex lagama dayo. Beec-mushtar bilowgiis bur iyo bajiye waaye.
Aqoon xumo abaar ka daran qorsho xumo abaar ka daran Unknown September 10, at 4: Saddex markaan bartaan ka gaboobay: Afar gacmood abaar ka daran Hunguri weyni waa cudur. Saddex weligaa haysku deyin.
Ammaano kugu raagtey inaad leedahay baad mooddaa. Unknown September 21, at 3: Baahiyi qof kuu daran bay kuu geysaa.
Saddex bay naagi kugu disha. Maahmaahuhu waxay si aad ah maahmaauyo muuqan jireen nolol maalmeedka bulshada ,oo had iyo jeer qurxin jiray haasaawaha, gogol fadhigaiyo hadal maalmeedka joogtada ah eey umaddu is waydaarsanayso.
Saddex ba madaxnimo ka qaada. Alle watow wehel uma baahna.
Saddex dadka kugu naca. Saddex col baa jira. Af waa kane, maxaa lagu aamaa Sidoo kale waxa ku duugan dhiirrigelin aad ku jibaaxi karto caqabado kale duwan. Belaayo kaa sii jeeda layskuma soo jeedsho.